[Zvakakosha] Notices uye Zvikumbiro kune Vashanyi (Zvinoenderana neCoronavirus Infection) | Ota Bunkanomori
[Zvakakosha] Zviziviso uye zvikumbiro kune vese vashanyi
202003 / 01(zuva)
Pane zvivakwa zvinotarisirwa uye zvinoshandiswa neOta Ward Cultural Promotion Association (Ota Ward Plaza, Ota Ward Hall Aplico, Ota Bunkanomori), Ministry of Health, Labor and Welfare neOta Ward vanofambisa ruzivo nezve hutachiona hutsva hwecoronavirus. ruzivo rwechizvino-zvino, tinonyatsoteerera kudzivirira hutachiona nekupararira kwekudzivirira, uye tinotora matanho anotevera.
Tinokumbira kunzwisisa kwako pamwe nekushandira pamwe kuitira kuchengetedza hutano hwevashanyi vese uye kudzivirira kupararira kwehutachiona.
Zvirwere zvekudzivirira hutachiona
Kukwesha doro kunoiswa munzvimbo dzakasiyana dzechivako, uye sipo yemvura inoiswa mune yega yega yekugezera.Ndokumbirawo ushandise sekukodzera.
Mukati mechivakwa, tinoita patrol disinfection kakawanda zuva nezuva tichishandisa yakasanganiswa makemikari.
Kune vashandi vanosangana nevatengi, isu tichapfeka mamask kutungamira uye kupindura.
Chikwangwani chekujekeswa nezve kushambidza maoko uye tsika yekukosora chakatumirwa muhoro.
Zvikumbiro kune vashanyi
Kana iwe uine chiratidzo chinotonhora-senge, ndapota rega kushanyira museum.
Ndokumbira mushandire pamwe mukupfeka maski zvakanyanya sezvinobvira muhoro
Ukakosora kana kuhotsira, ndapota shandira pamwe ne "etiquette" yekuvhara muromo wako nemask, hengechepfu, nyama, mukati mebhachi rako nemaoko.
Nzira chaiyo yekugeza maoko
Nezve hunhu hwekukosora
Nezve kubata zvesimba, nezvimwe.
Nezve matambiro akaitwa nesangano iri, zvakagadziriswa kukanzura kana kudzosera imwe yacho.Zvichienderana nemhinduro nemirairo yenyika uye Ota Ward, zviitwa zvinogona kumiswa kana kumisikidzwa zvinogona kuitika mune ramangwana.Isu tinokuchengeta iwe uchivandudza pane yazvino chimiro pane yedu webhusaiti uye yepamutemo Twitter account, saka ndokumbira utarise kana uronga kutishanyira.
Nezve kubatwa kwemitambo uye misangano inoitirwa panzvimbo imwe neimwe senzvimbo, zvinoratidzwa zvakanyanya sezvinobvira mune peji rekumba peji "XNUMX kuvaka chiitiko karenda", asi ndokumbirawo mubvunze neese murongi kuti uwane ruzivo rwechizvino-zvino.